စီးပွားရေး သတင်းများ | Eleven Media Group
စီးပွားရေး သတင်းများ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ စီမံကိန်းသုံးခုအတွက် JICA ချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၂၁၀ ပေးအပ်ရန် လက်မှတ်ရေးထိုး.
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ စီမံကိန်းသုံးခုအတွက် JICA မှ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၁၀ ပေးအပ်ရန် ချေးငွေစာချုပ်များကို ဇွန် ၃၀ ရက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Read more about လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ စီမံကိန်းသုံးခုအတွက် JICA ချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၂၁၀ ပေးအပ်ရန် လက်မှတ်ရေးထိုး.
လာမည့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍများမှ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးမှု နှစ်စဉ် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် တိုးတက်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်
လာမည့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍများမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်ဖေန်တီးပေးမှုမှာ နှစ်စဉ် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် တိုးတက်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ဗြိတိန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့ကြီး၏စစ်တမ်းတွင် ခန့်မှန်းချက်အရ သိရသည်။
လာမည့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးမှုမှာ နှစ်စဉ် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိလာနိုင်ပြီး ယခင်က အလုပ်အကိုင်သုညနီးပါးမှ သုည ဒသမ ၂ သန်းအထိ တိုးလာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ Read more about လာမည့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍများမှ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးမှု နှစ်စဉ် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် တိုးတက်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်
အာဆီယံ-တောင်ကိုရီးယား ခ၇ီးသွားလုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာ့ခရီးစဉ်များကို တောင်ကိုရီးယားရှိ ခရီးသွားကုမ္ပဏီများ စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်ပြီး ယခင်နှစ်ထက် ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုပိုများလာဟုဆို
မြန်မာ့ခရီးစဉ်များကို တောင်ကိုရီးယားရှိ ခရီးသွားကုမ္ပဏီများ စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာပြီး ယခင်နှစ်ထက် ခရီးသွားဝင်ရောက်မှု ပိုမိုများပြားလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့၌ ဇွန် ၁၅ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံ-တောင်ကိုရီးယား ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာ့ခရီးစဉ်များကို တောင်ကိုရီးယားခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များမှ စိတ်ဝင်စားမှုများပြားလာခဲ့ကြောင်း ဟိုတယ်/ခရီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။ Read more about အာဆီယံ-တောင်ကိုရီးယား ခ၇ီးသွားလုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာ့ခရီးစဉ်များကို တောင်ကိုရီးယားရှိ ခရီးသွားကုမ္ပဏီများ စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်ပြီး ယခင်နှစ်ထက် ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုပိုများလာဟုဆို
SMIDB ဘဏ်အနေဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်မှတစ်ဆင့် ရရှိသော ချေးငွေ ကျပ်ဘီလျံ ၉၀ ကို အသေးစား အလတ်စား လုပ်ငန်းများအား ထုတ်ချေး
အသေးစားနှင့် အလတ်စားစက်မှုလုပ် ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (SMIDB) အနေဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ (၄) မှတစ်ဆင့် ရရှိခဲ့သောချေးငွေ ကျပ် ၉၀ ဘီလျံကို အသေးစား အလတ်စား လုပ်ငန်းများအား ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိကြောင်း အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ သိရသည်။
အဆိုပါချေးငွေများကို စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ချေးငွေများကို ဦးစားပေး ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိကာ ယင်းသို့ချေးရာတွင် စက်မှုကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများအား အတိုးနှုန်းကို ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ထုတ်ချေးပေးနေကြောင်း သိရသည်။ Read more about SMIDB ဘဏ်အနေဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်မှတစ်ဆင့် ရရှိသော ချေးငွေ ကျပ်ဘီလျံ ၉၀ ကို အသေးစား အလတ်စား လုပ်ငန်းများအား ထုတ်ချေး
ဗုံးဆန်ကျရောက် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် ကုန်သွယ်မှုများ ပုံမှန်လည်ပတ်လျက်ရှိဟုဆို
မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၌ ကုန်သွယ်မှုများ ပုံမှန်အတိုင်း လည်ပတ်လျက်ရှိကြောင်း မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးဝင်းမောင်က ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
ဇွန် ၂၇ ရက်ညပိုင်းတွင် မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အတွင်းသို့ ဗုံးဆန်သုံးလုံးကျရောက် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်များကြောင့် ကုန်သွယ်မှုများ ဆောင်ရွက်မှုတွင် ခက်ခဲသွားခြင်း ကြန့်ကြာသွားခြင်းမရှိဘဲ ပုံမှန်အတိုင်း ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ Read more about ဗုံးဆန်ကျရောက် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် ကုန်သွယ်မှုများ ပုံမှန်လည်ပတ်လျက်ရှိဟုဆို
ပြင်ပဈေးကွက်တွင် တစ်ဒေါ်လာ ၁၁၈၂ ကျပ် ၀န်းကျင်ရှိ
ဇွန် ၂၆ ရက်ပြင်ပဈေးကွက်တွင် တစ်ဒေါ်လာ ၁၁၈၂ ကျပ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေကြောင်း ပြင်ပဈေးကွက်အသိုင်းအ၀ိုင်းထံမှ သိရသည်။ Read more about ပြင်ပဈေးကွက်တွင် တစ်ဒေါ်လာ ၁၁၈၂ ကျပ် ၀န်းကျင်ရှိ
၂၀၁၅ ခုနှစ် အမေရိကန်ခရီးသွားအော်ပရေတာအသင်း၏ စစ်တမ်းအရ လည်ပတ်ရန် အကောင်းဆုံးနိုင်ငံများထဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ခရီးသွားအော်ပရေတာအသင်း၏ စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရ လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံများထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထိပ်ဆုံးကရပ်တည်နေကြောင်း Myanmar Tourism Federation မှသိရသည်။ထိုသို့ကောက်ယူရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်လည်ပတ်ရန် အကောင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ပါဝင်ပြီး ယခုနှစ်တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်နေကြောင်း အဆိုပါ Federation မှသိရသည်။ Read more about ၂၀၁၅ ခုနှစ် အမေရိကန်ခရီးသွားအော်ပရေတာအသင်း၏ စစ်တမ်းအရ လည်ပတ်ရန် အကောင်းဆုံးနိုင်ငံများထဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်
ဆင်းခွန်ဂိတ် အဆင့်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပြီးနောက် မြိတ်မြို့နှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကုန်သည်များ စိတ်ဝင်စားလာ
မြန်မာနိုင်ငံ မောတောင်နယ်စပ်ဂိတ်နှင့် နယ်ချင်းထိစပ်နေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဆင်းခွန်ဂိတ်အား အဆင့်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကုန်သည်များ မြိတ်မြို့နှင့် ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်ရန်အတွက် စိတ်ဝင်တစား လာရောက်ဆွေးနွေးမှု အများအပြား ပြုလုပ်လာကြောင်း သိရသည်။ထိုင်းနိုင်ငံ ပရာကျွတ်ခီရီခံခရိုင် ဒန်းသိန်ခွန်းရွာရှိ ဆင်းခွန်ဂိတ်အား ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရမှ မေ ၂၃ ရက်တွင် အထူးယာယီ နယ်စပ်ဂိတ်အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ Read more about ဆင်းခွန်ဂိတ် အဆင့်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပြီးနောက် မြိတ်မြို့နှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကုန်သည်များ စိတ်ဝင်စားလာ
(၅၂) ကြိမ်မြောက် ကျောက်မျက်ပြပွဲတွင် ယူရို ၁၃ သန်းခန့်တန်ကြေးရှိ ကျောက်စိမ်းတွဲနှင့် ယူရိုခြောက်သိန်းတန် ပတ္တမြားငမောက်အတွဲအား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချမည်
(၅၂) ကြိမ်မြောက် ကျောက်မျက်ပြပွဲ၌ ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် အခြေခံဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးအတွဲအဖြစ် ယူရို ၁၃ သန်းခန့်တန်ကြေးရှိ ကျောက်စိမ်းတွဲနှင့် ယူရိုခြောက်သိန်းတန်ကြေးရှိ ပတ္တမြားငမောက်အတွဲအား ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြပွဲဗဟိုကော်မတီမှ သိရသည်။ပြပွဲဗဟိုကော်မတီဝင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းသူက "အခြေခံဈေးအမြင့်ဆုံးက ၁၂ သန်း ၈ သိန်းတန်ဈေးပြိုင်စနစ်အတွဲပါ။ တင်ဒါအချောထည်မှာတော့ ယူရို ၁၀၀၀ ကအနိမ့်ဆုံးပါ။ အနိမ့်ဆုံးအချောထည်ကတော့ ယူရို ၁,၀၀၀ပါ" ဟုပြောကြားသည်။ Read more about (၅၂) ကြိမ်မြောက် ကျောက်မျက်ပြပွဲတွင် ယူရို ၁၃ သန်းခန့်တန်ကြေးရှိ ကျောက်စိမ်းတွဲနှင့် ယူရိုခြောက်သိန်းတန် ပတ္တမြားငမောက်အတွဲအား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချမည်
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ ဒေါ်လာလေးဘီလျံကျော် ပြနေခြင်းမှာ MIC သွင်းကုန်များဖြစ်သည့် Draw Back များကြောင့်ဖြစ်ပြီး ငွေသားအနေဖြင့် လိုငွေပြနေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း စီးပွား/ကူးသန်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြား
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ ဒေါ်လာလေးဘီလျံကျော် ပြနေခင်းမှာ MIC သွင်းကုန်များဖြစ်သည့် Draw Back များကြောင့် ပြနေခြင်းဖြစ်ပြီး ငွေသားအနေဖြင့် လိုငွေပြန်နေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က နေပြည်တော်ရှိ ACMECS ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ၌ တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားသည်။ Read more about ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ ဒေါ်လာလေးဘီလျံကျော် ပြနေခြင်းမှာ MIC သွင်းကုန်များဖြစ်သည့် Draw Back များကြောင့်ဖြစ်ပြီး ငွေသားအနေဖြင့် လိုငွေပြနေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း စီးပွား/ကူးသန်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြား
မြန်မာ့အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အကောင်းဆုံးကဏ္ဍများတွင် ဆက်သွယ်ရေး၊ ငွေကြေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပြီး အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားမှု ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း နှစ်စဉ် တိုးတက်လာနိုင်ကြောင်း UKTI အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြ
မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အကောင်းဆုံးကဏ္ဍများတွင် သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယ်ရေး၊ ငွေကြေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများပါဝင်ပြီး အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားမှု နှစ်စဉ် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာနိုင်ကြောင်း UKTI မှ ထုတ်ပြန်သည့် Burma's Skill Sector အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်။ Read more about မြန်မာ့အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အကောင်းဆုံးကဏ္ဍများတွင် ဆက်သွယ်ရေး၊ ငွေကြေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပြီး အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားမှု ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း နှစ်စဉ် တိုးတက်လာနိုင်ကြောင်း UKTI အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြ
(၅၂) ကြိမ်မြောက် ကျောက်မျက်ပြပွဲ ပြည်ပရတနာကုန်သည် လာရောက်မှု ထက်ဝက်ခန့် လျော့ကျ
Read more about (၅၂) ကြိမ်မြောက် ကျောက်မျက်ပြပွဲ ပြည်ပရတနာကုန်သည် လာရောက်မှု ထက်ဝက်ခန့် လျော့ကျ
ယူရိုငါးသန်းတန် ပတ္တမြား ပါဝင်သည့် (၅၂) ကြိမ်မြောက် ကျောက်မျက်ပြပွဲတွင် ပြည်ပရတနာကုန်သည် လာရောက်မှု ယခင်နှစ်ကထက် ထက်ဝက်ခန့် လျော့ကျ
ဇွန် ၂၄ ရက်မှ စတင်ကျင်းပသည့် (၅၂) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ပြပွဲတွင် ယခင်နှစ်ထက် ကျောက်မျက်တွဲများ ပိုမိုတင်ပြ ရောင်းချခဲ့သော်လည်း ပြည်ပရတနာကုန်သည် လာရောက်မှု ထက်ဝက်ခန့် လျော့ကျခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်သည်များသာ အများဆုံး လာရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ပြပွဲတွင် ပြည်တွင်းရတနာကုန်သည်များနှင့် နိုင်ငံပေါင်း ၂၂ နိုင်ငံမှ ပြည်ပရတနာကုန်သည် ၆,၀၇၂ ဦး ဖိတ်ကြားထားရှိသော်လည်း ပြည်ပနိုင်ငံများဖြစ်သည့် တရုတ်၊ လာအို၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ အစ္စရေးတို့မှ ၂၂၃၅ ဦး လာရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Read more about ယူရိုငါးသန်းတန် ပတ္တမြား ပါဝင်သည့် (၅၂) ကြိမ်မြောက် ကျောက်မျက်ပြပွဲတွင် ပြည်ပရတနာကုန်သည် လာရောက်မှု ယခင်နှစ်ကထက် ထက်ဝက်ခန့် လျော့ကျ
JICA နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်မည့် ပုဂံဒေသ ခရီးသွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရှေ့ပြေးစီးမံကိန်းများ ထုတ်ပြန်
ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (JICA) နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်မည့် ပုဂံဒေသ ခရီးသွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းများကို ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။“ပုဂံဒေသဆိုင်ရာ ခရီးသွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး” အမည်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စာရင်းအရ ဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသည့် ရှေ့ပြေးစီမံကိန်း ၁၆ ခု ပါဝင်နေကြောင်း သိရသည်။ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းများ အရပုဂံဒေသ၏ အမွေအနှစ်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို အဓိက လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Read more about JICA နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်မည့် ပုဂံဒေသ ခရီးသွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရှေ့ပြေးစီးမံကိန်းများ ထုတ်ပြန်
အလုပ်သမားများတောင်းဆိုသည့် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ ကျပ် ၃၂၀၀ မှ ၄၀၀၀ ကြားမပေးနိုင်ဘဲ ကျပ် ၂၅၀၀ သာပေးနိုင်ကြောင်း CMP လုပ်ငန်းရှင်များ သတင်းစာရှင်းလင်း
အလုပ်သမားများတောင်းဆိုသည့် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ ကျပ် ၃၂၀၀ မှ ၄၀၀၀ ကြားမပေးနိုင်ဘဲ ကျပ် ၂၅၀၀ သာပေးနိုင်ကြောင်း အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ CMP လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောကြားသည်။ဇွန် ၂၂ မှ ၂၃ ရက်အထိ ရန်ကုန်မြို့ UMFCCI တွင် နှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့သည့် "အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ" ၌ နာရီပေါင်း ၂၀ နီးပါး ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း တိကျသည့်အဖြေတစ်ခု မရရှိခဲ့ပေ။ Read more about အလုပ်သမားများတောင်းဆိုသည့် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ ကျပ် ၃၂၀၀ မှ ၄၀၀၀ ကြားမပေးနိုင်ဘဲ ကျပ် ၂၅၀၀ သာပေးနိုင်ကြောင်း CMP လုပ်ငန်းရှင်များ သတင်းစာရှင်းလင်း
အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ယာယီလိုင်စင်များ ထပ်မံချထားပေးနေပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၄၄ ဖွဲ့ရှိလာ
အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် ယာယီလိုင်စင်များ ထပ်မံချထားပေးနေပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူလုပ်ကိုင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၄၄ ဖွဲ့အထိ ရှိလာနေပြီဖြစ်ကြောင်း အသေးစားပုဂ္ဂလိက ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် ၂/ ၂၀၁၅ အရ သိရသည်။ Read more about အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ယာယီလိုင်စင်များ ထပ်မံချထားပေးနေပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၄၄ ဖွဲ့ရှိလာ
စပိန်အခြေစိုက် Melia Hotels က ပုဂံနှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ဟိုတယ်တည်ဆောက်ရန်လေ့လာ
စပိန်အခြေစိုက် Melia Hotels International က ပုဂံနှင့်မန္တလေးမြို့များတွင် ဟိုတယ်တည်ဆောက်ရန် လေ့လာနေကြောင်း သိရသည်။နေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ ကွန့်ဖရင့်တွင် Melia Hotels မှ ဒါရိုက်တာအဆင့်ရှိသူတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပုဂံ၊ မန္တလေးတို့တွင် ဟိုတယ်တည်ဆောက်ရန် လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စပိန်သံရုံးမှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံက ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးစိုင်းအုန်းကျော်နှင့် ပြောကြားချက်များအတွင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Read more about စပိန်အခြေစိုက် Melia Hotels က ပုဂံနှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ဟိုတယ်တည်ဆောက်ရန်လေ့လာ
ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အလွန် အာဆီယံအသိုက်အ၀န်း တည်ဆောက်ရေးတို့ပါဝင်သော (၆) ကြိမ်မြောက် ACMECS အစည်းအဝေး၏ နေပြည်တော်ကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်
အိမ်နီးချင်းကောင်းပီသမှုကိုတည်ဆောက်ရေး၊ ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အလွန် အာဆီယံအသိုက်အ၀န်းတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက် အတည်ပြုလိုက်သော (၆) ကြိမ်မြောက် ဧရာဝတီ-ကျောက်ဖယား-မဲခေါင်စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟာဗျူဟာ (ACM-ECS) ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာ နေပြည်တော်ကြေညာစာတမ်းအား ဇွန် ၂၃ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ယခုထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာစာတမ်းသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၈ အတွက်ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာစာတမ်းဖြစ်ပြီး ACMECS ၏ ဗီယန်ကျင်းကြေညာစာတမ်းကိုမူ ၂၀၁၃-၂၀၁၅ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်များဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Read more about ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အလွန် အာဆီယံအသိုက်အ၀န်း တည်ဆောက်ရေးတို့ပါဝင်သော (၆) ကြိမ်မြောက် ACMECS အစည်းအဝေး၏ နေပြည်တော်ကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်
ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ် လေးနိုင်ငံအတွင်း ထိုင်းဘတ်ငွေ နှစ်သန်းအထိ ယူဆောင်ခွင့်ပြုရေးနှင့် ACMECS Single VISA အစီအစဉ် အပါအ၀င် အခြေခံအချက် ခြောက်ချက်ပါ ကြေညာစာတမ်းအား (၆) ကြိမ်မြောက် ACMECS ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ အကြိုအဖြစ် ထုတ်ပြန်
အာဆီယံနိုင်ငံများထဲမှ CLMV နိုင်ငံများဖြစ်သော ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများအတွင်း ထိုင်းဘတ်ငွေ နှစ်သန်းအထိ ယူဆောင်ခွင့်ပြုရေးနှင့် ACMECS Single VISA အပါအ၀င် အခြေခံအချက် ခြောက်ချက် ပါဝင်သည့် ကြေညာစာတမ်းအား ဇွန် ၂၂ ရက် နေပြည်တော်ရှိ Kempinski Hotel တွင် ကျင်းပသည့် (၆)ကြိမ်မြောက် ACMECS Business Forum တွင် ACMECS ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ၏ အကြိုအဖြစ် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ Read more about ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ် လေးနိုင်ငံအတွင်း ထိုင်းဘတ်ငွေ နှစ်သန်းအထိ ယူဆောင်ခွင့်ပြုရေးနှင့် ACMECS Single VISA အစီအစဉ် အပါအ၀င် အခြေခံအချက် ခြောက်ချက်ပါ ကြေညာစာတမ်းအား (၆) ကြိမ်မြောက် ACMECS ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ အကြိုအဖြစ် ထုတ်ပြန်
နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းနှင့်အတူ မြင့်တက်လာခဲ့သော ပြည်တွင်းဆန်ဈေး ငွေလဲနှုန်း ကျဆင်းသွားသော်လည်း ပြန်လည်ကျဆင်းခြင်း မရှိဘဲ အမြင့်ဈေးဖြင့် ဆက်လက်ရှိနေ
နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းနှင့်အတူ ပြည်တွင်း ဆန်ဈေးသည် ယခုလအစောပိုင်းအတွင်း ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ ၀န်းကျင် မြင့်တက်လာပြီးနောက် လက်ရှိအချိန်တွင် ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းမှာ ကျဆင်းနေပြီဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်ကျဆင်းခြင်း မရှိကြောင်း ဈေးကွက်အတွင်းမှ သိရသည်။ Read more about နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းနှင့်အတူ မြင့်တက်လာခဲ့သော ပြည်တွင်းဆန်ဈေး ငွေလဲနှုန်း ကျဆင်းသွားသော်လည်း ပြန်လည်ကျဆင်းခြင်း မရှိဘဲ အမြင့်ဈေးဖြင့် ဆက်လက်ရှိနေ
ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် ဇွန်လဆန်းပိုင်းမှစတင်၍ အိမ်အငှားဈေးကွက်အေးနေ
Read more about ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် ဇွန်လဆန်းပိုင်းမှစတင်၍ အိမ်အငှားဈေးကွက်အေးနေ
ရန်ကုန်မြို့၏ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အတွင်း ရုံးခန်းအချို့သာ ငှားရမ်းမှုရှိပြီး ဇွန်လဆန်းမှစ၍ အိမ်အငှားဈေးကွက် အေးနေ
ရန်ကုန်မြို့၏ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အတွင်း အရောင်းအ၀ယ် ကျဆင်းလျက်ရှိပြီး အငှားဈေးကွက် အနေဖြင့်မူ ရုံးခန်းအချို့သာ ငှားရမ်းမှုရှိပြီး ဇွန်လပိုင်းမှစ၍ အိမ်ငှားရမ်းမှု မရှိသလောက် နည်းပါးနေကြောင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းများထံမှ သိရသည်။ Read more about ရန်ကုန်မြို့၏ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အတွင်း ရုံးခန်းအချို့သာ ငှားရမ်းမှုရှိပြီး ဇွန်လဆန်းမှစ၍ အိမ်အငှားဈေးကွက် အေးနေ
သစ်အချောထည် ပို့ကုန်တိုးတက်ရေးအတွက် အာဆီယံနိုင်ငံများနည်းတူ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် လိုအပ်ဟု တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ပြောကြား
သစ်အချောထည် ပို့ကုန်တိုးတက်ရေးအတွက် အာဆီယံနိုင်ငံများနည်းတူ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။အာဆီယံနိုင်ငံများ၌ GDP တိုးတက်ရေးအတွက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအပေါ်တွင် ထောက်ပံ့ကြေးများပေးဖြင့် ပို့ကုန်တင်ပို့မှု တိုးတက်စေရန် လုပ်ဆောင်ကြကြောင်း သိရသည်။ Read more about သစ်အချောထည် ပို့ကုန်တိုးတက်ရေးအတွက် အာဆီယံနိုင်ငံများနည်းတူ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် လိုအပ်ဟု တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ပြောကြား
ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှု အဓိကပြုလုပ်သည့် ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်သွယ်ရေးမှ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ဒေါ်လာ သန်း ၆၁၀ ကျော် လျော့ကျ
ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုအဓိက ပြုလုပ်သည့် ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်သွယ်ရေးမှ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ဒေါ်လာ သန်း ၆၁၀ ကျော် လျော့ကျနေကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ရာတွင် ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်သွယ်မှုနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတို့မှ ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်သွယ်ရေးမှ ပြည်ပကုန်သွယ်မှုကို အဓိကလုပ်ဆောင်နေပြီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်ကြောင်း သိရသည်။ Read more about ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှု အဓိကပြုလုပ်သည့် ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်သွယ်ရေးမှ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ဒေါ်လာ သန်း ၆၁၀ ကျော် လျော့ကျ
အိန္ဒိယဘက်မှ အ၀ယ်အေးခြင်း၊ ဒေါ်လာဈေးငြိမ်သွားခြင်းတို့ကြောင့် ဇွန်လပထမပတ်က မတ်ပဲတစ်တန် ၁၄ သိန်းကျော် ရှိရာမှ လက်ရှိတွင် ပြန်လည်ကျဆင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကပြည်ပပို့ကုန်များတွင် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည့် မတ်ပဲဈေး ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပြန်လည်ကျဆင်းသွားကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ဈေးကျဆင်းရခြင်းသည် အိန္ဒိယဘက်မှအ၀ယ်အေးခြင်း၊ ဒေါ်လာဈေးတည်ငြိမ်သွားခြင်းတို့ကြောင့် ဇွန်လ ဆန်းပိုင်းက မတ်ပဲတစ်တန်ကျပ် ၁၄ သိန်း ကျော်မှ ဇွန်ဒုတိယပတ်တွင် ၁၄ သိန်းအောက် သို့ကျဆင်းသွားကြောင်း ဘုရင့်နောင်ကုန် စည်ဒိုင်မှ သိရသည်။
Read more about အိန္ဒိယဘက်မှ အ၀ယ်အေးခြင်း၊ ဒေါ်လာဈေးငြိမ်သွားခြင်းတို့ကြောင့် ဇွန်လပထမပတ်က မတ်ပဲတစ်တန် ၁၄ သိန်းကျော် ရှိရာမှ လက်ရှိတွင် ပြန်လည်ကျဆင်း